Summer 2012 selihlanganise ukumangala ngesimo abesifazane imfashini ezithembisa Amathrendi stylish. ezihlukahlukene okunjalo uyabukeka emehlweni, kodwa kakhulu ukukhetha kubangela ukudideka. Lokho kuyoba emangalisayo imfashini izitayela kuleli hlobo sika okuzoba at esiqongweni ukuthandwa, yini umbala kuyoba efaneleke kakhulu?
Summer - isikhathi imibala kwesivamile, kangangokuthi ngo-2012, omunye mikhondo ethandwa kakhulu kuyoba idube. Imfashini, engavamile futhi fresh! Ngo isizini entsha, nabaqambi kuyokushiya umangele wangempela boom yezicathulo ezimibalabala. intando ezingengaphansi ethandwa ezilwaneni nasezimileni. Cats and izinyoni, ojekamanzi nezimvemvane, iminenke - ezihlukahlukene abamele nezilwane ezimangalisayo ziyohambisana ozinikezele ingubo, oqeda kwemizwelo.
In the new isizini ihlobo kuyoba ukuthambekela okunamandla ethandwa iwukuba ukuhlanganisa incongruous. Abaklami ushayele fair ubulili ukusetshenziswa stylish isethi eyodwa mikhondo asebenzayo amaningi. Kodwa ungakhohlwa ukuthi izithombe inala izibalo ngokuvamile impikiswano futhi ngicebe kakhulu.
Ngokuphambene mikhondo eziningana ezindlini isethi eyodwa imfashini, owethulwe Ensemble obunobunye wenza lendwangu efanayo.
Ngo isizini ihlobo, ekugcineni black zivame ukufiphala ubala, enika esihlalweni sakhe omhlophe, okuyinto ngakwesokudla iba yesibili umbala langempela kakhulu isizini ihlobo ngo-2012 ngokushesha ngemva tangerine. Abaklami belulekwa ukuba adale izithombe esekelwe ngokuqondile kokumhlophe: izingubo ezimhlophe, izicathulo, izesekeli. Kungazelelwe izintandokazi uyeza imfashini isizini waphula umbala ophuzi okungukuthi brunettes ezishukiwe ephelele. Futhi okudume kakhulu futhi nemfashini ukuba shades of eluhlaza: jade, oluluhlaza amnyama, umnqumo, Emerald.
Umkhuba wokulala isizini ezayo ziyiqiniso izinto okusobala. Mnene Airy ingubo, isiketi namanzi noma phezulu - yilokho kubalulekile ukuba wonke ozinikezele kuleli hlobo. Kuyaphawuleka ukuthi ngo-fashion njengabesifazane intombazane romantic, okusobala kangaka futhi izinto engasindi kuyiphi kulula ukwakha ngubo isisindo nenhle Liyindawo lidumile abaklami.
Futhi ehlobo lika-2012 ngesikhathi isiqongo wokuphuthuma kuyoba obucayi ikhabethe izinto appliques ukuthi kuhlobisa lokhu noma lokhuya into. Iqoqo ehlobo 2012 akunakwenzeka ukusho ukuzinikela Abaklami komunye isitayela esithile isikhathi. Ngokwesibonelo, isitayela ethandwa kakhulu 20s, elinesimo cut oqondile, okhalweni ongaphakeme, izigqoko encane, Cloche, kanye nezinwele ezimfishane isitayela Flapper. Ngaphezu kwalokho nezokusigcoba style nenhle kuyinto 50s, okuyinto ihlukile umnyuziki isiketi sigqoka futhi okhalweni ewumngcingo, High Heels kanye ukubukeka lengenamaphutsa. Futhi ungathintana indiva ubukhona 70s isitayela izimfanelo: izicathulo, izigqoko zelanga eziwumhelane, trouser amasudi, ibhulukwe insimbi bottomed kanye amabhande ububanzi.
Kufanele ukuthi ukuhlukahluka ukuthi Abaklami zigcwalisa lesi siprofetho ngokunikela nathi kuleli hlobo, fashionista uyobheka umxhwele futhi stylish.
Umagazini yabesifazane: http://ladiesmagazine.ru/
Izitayela zefashini: i-skirt-bell enezinwele ezigqamile. Yini okufanele ugqoke i-skirt-bell ende?
Kanjani kute wente imaskhi ezimnyama amachashazi amnyama?